”Car soo saar!” – Maraykanka oo maalintii 3-aad Sucuudiga ku cadaadinaya inuu yareeyo saliidda uu soo saaro (Sabab cajiib ah) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Car soo saar!” – Maraykanka oo maalintii 3-aad Sucuudiga ku cadaadinaya inuu...
”Car soo saar!” – Maraykanka oo maalintii 3-aad Sucuudiga ku cadaadinaya inuu yareeyo saliidda uu soo saaro (Sabab cajiib ah)
(Riyaad) 12 Abriil 2020 – Maraykanka ayaa sii karaariyey cadaadiska uu ku hayo Sucuudiga oo si qoor qabad ah ugu khasbayo inay yareeyaan saliidda ay soo saaraan, si aysan u musallifin sharikaadkiisu, isla markaana aanay shaqo la’aani ugu dhicin dadkiisa ka shaqeeya qodaalka saliidda.
Wadahadalkan oo uu Donald Trump Sucuudiga u jilayo inuu labada dhinac dhex dhexaadinayo ayaa galay maalintii 3-aad.
Wadahadalkan ayaa looga gol leeyahay in lagu joojiyo wax lagu sheegay dagaalkii sicirka saliidda, balse Mexico iyo Saudi Arabia ayaa Sabtigii shalay ahaa diidey inay soo jeedintaa ku yalmaan, sida ku dhigan Bloomberg.
Badbaadinta kumannaan wershadood oo saliidda sifeeya, malaayiin shaqo iyo dhaqaalayoowga dalalka saliidda ku tiirsan ayaa qar ka lulata, jeer uu dunida caloosha u dhigay cudurka caalamiga ah ee coronavirus.
Waxaa sharikaadkaasi ugu badan kuwa Maraykanka oo qodaalka, sifaynta iyo ka shaqayntaba ka xoolaysta oo uu saamigoodii dhulka galay, taasoo ah arrin aanu istaraatiji ahaan aqbali karin Maraykanku, isagoo Sucuudiga ku cadaadinaya inuu ciyaartaa joojiyo.
Saliidda oo 6 sano kahor $100 doollar la iibinayey halkii fuusto ayaa maanta ka sii dhacaysa $23 doollar, waxaana ugu wacan dagaal saliideed dhex maray Sucuudiga iyo Ruushka, sida uu qorayo New York Times.
Previous articleAnteenooyinka 5G oo la sheegay inay ka dambeeyaan Covid-19 & burburin lagu bilaabay + Sawirro
Next article”Sariiraha noo banneeya!” – Covid-19 oo ku dhacay xubnihii ugu badnaa ee qoyska reer boqor & tillaabo ay ku dhaqaaqeen